जंगबहादुरका मामा माथवरसिंहको महाअष्टमी
Thu, Jan 21, 2021८ माघ, २०७७
- निर्भीकजंग रायमाझी
नेपालको राजकाजमा थापा वंशको विशेष प्रभाव छ । थापा कूलमा जन्मिएका अधिकांश पुरुष सदस्य नेपाल एकीकरणपछि तत्कालीन नेपाली सेना र राजकाजमा संलग्न थिए ।
प्रधानमन्त्री जनरल माथवरसिंह थापा (सन् १७९८– १८४५) यही थापा कूलमा जन्मिएर जीवनभरी नेपाली राजकाजमा संलग्न व्यक्ति हुन् ।
उनी चर्चित राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाका मामा हुन् भने भिमसेन थापाका भतिजा । जंगबहादुरले सत्ता हत्काउनुभन्दा एक वर्षअघिसम्म उनी नेपालको प्रधानमन्त्री थिए ।
उनै प्रधानमन्त्री माथवरसिंह थापाले मनाउने दशैंबारे धेरै किंवदन्ती र भनाइहरू नेपाली जनमानसमा आजसम्म चर्चाको विषय हुने गर्छ । तत्कालीन केही विदेशी कुटनीतिज्ञहरूले समेत माथवरसिंह थापाको वीरताको प्रशंसा गरेको पाइन्छ ।
इतिहासकार ज्ञानमणी नेपालका अनुसार माथवरसिंहले नेपाल खाल्डोमा नै सबैभन्दा तामझाम गरेर दशैं मनाउने व्यक्ति थिए । अजंगको जीउडाल भएका माथवरसिंह प्रत्येक वर्ष दशैंमा भव्य देवीपूजा गर्थे ।
उनी एक हातले बाह्र धार्नीको बोको मार हानेर चटक्कै छिनाउथे भने अर्को हातले मुठीभरी राखेको हाडे–ओखर मरक्कै पार्थे । नेपालले लेखेका छन् । इतिहासकारले उक्त प्रहारको नाम ‘माथवरसिंहको मार’ दिएका छन् ।
तर अपशोच उनी मर्ने १९०१ सालको दशैंमा भने बोको पनि छिनाइएको थिएन र ओखर पनि फुटेको थिएन । भनिन्छ, माथवरसिंहको तरबारको मार कहिले पनि दोहोर्याएर पर्दैनथ्यो । जेलाई प्रहार गर्नुपरे पनि उनी एकै मार मात्र हानेर त्यसको वध गर्थे ।
सामान्यतः दशैं भन्ने बित्तिकै हामी टिकाको दिन र फूलपातिलाई विशेष मान्छौं । तर माथवरसिंह थापा महाअष्टमीको दिनलाई मात्र दशैंको रुपमा मनाउँथे ।
इतिहासकारको कथनअनुसार माथवरसिंह थापा फौजमा जर्नेल हुँदा काठमाडौं पाल्पा र गोरखामा एकैसाथ दशैं मनाउथे ।
देवीलाई प्रशन्न बनाउन उनी बोका, कुखुरा, हाँस, खसी, राँगोलगायत ११ वटा जनावरको बली चढाउँथे । यस विशेष दिनमा उनको पूजाआजा दिनभरी नै चल्ने गथ्र्यो ।
उनी आफू काठमाडौंमा भएपनि उनको फौजले एकै समयमा पाल्पा, गोरखा र काठमाडौंमा तोप पड्काएर बढाईँ गथ्र्यो ।
उपत्यका बाहिरको गोरखाको मनकामना, पर्साको गहवामाई, सप्तरीको छिन्नमस्ता भगवती, धनुषाको राजदेवी, काभ्रेपलाञ्चोकको नाला भगवती र पलाञ्चोक भगवतीमा माथवरसिंहको अधिकारप्राप्त फौजले भव्य पूजाआराधना गथ्र्यो ।
शक्ति र बाहुबलको सधैं सम्मान गर्ने माथवरसिंहले देवीबाट आफुमा अदम्य शक्ति मिलोस् भन्ने कामनाले महाअष्टमीको दिनलाई विशेष बनाउने गर्थे ।
राज्यका तर्फबाट हनुमानढोकाको मूल चोकमा तलेजु भवानीलाई ५४ राँगा र ५४ वटा बोकाको बलि अर्पण गर्ने समारोहमा समेत माथवरसिंह थापाको उपस्थिति रहन्थ्यो ।
सैन्य पोसाकमा ठाँटिएर उनी हनुमानढोका दरबार पुग्थे । पछि प्रधानमन्त्री भएका बखत जुनसुकै समारोहमा पनि नाङ्गो तरबार लिएर जान पाउने अधिकार उनलाई दिइएको थियो ।
को हुन् माथवरसिंह थापा ?
माथवरसिंह थापा छोटाकाजी अमरसिंह थापाका नाती तथा नयनसिंह थापाका कान्छा छोरा हुन् । उनको जन्म वि.सं १८५५ असोज १८ गते भएको थियो ।
वि.सं १८६४ मा काँगडा किल्लाको युद्धमा बडाकाजी अमर सिंह थापाको सहमति बिना नयनसिंह थापाले शत्रुलाई आक्रमण गर्दा वीरगति पाएका थिए ।
यसपछि माथवर सिंह थापा सानैमा टुहुरा भए । वि.सं १८६८ मा उनी दाजु उजिरसिंह र आफ्ना हजुरबा अमरसिंह थापासंग बस्न पाल्पा गए । वि.सं १८७१–७३ को नेपाल–अंग्रेज युद्धमा माथवरसिंह थापा पनि लडे ।
माथवरसिंह थापाको आकर्षक र प्रभावशाली व्यक्तित्व थियो । उनको व्यक्तित्वका सम्बन्धमा विदेशी लेखकले समेत उनलाई कसैले सिंहसँग त कसैले अफगानी नागरिकसँग तुलना गरेको पाइन्छ ।
उनको व्यक्तित्वका सम्बन्धमा उनका त्यसबेलाका लेखक जे.टी. व्हीलरले दरबारमा माथवरसिंह थापा कुकुरहरूको झुण्डमध्ये एक सिंह थिए र उनी एक डरलाग्दो व्यक्ति थिए भनेर लेखेका छन् ।
अर्का विदेशी लेखक मड डाइभरले पनि माथवरसिंहको व्यक्तित्वका सम्बन्धमा भनेका छन्, ‘उनी सिंह जस्तै बहादुर थिए तर उनी कातरहरूद्वारा मारिनु प¥यो ।
यस्तो अपराध एसियामा मात्र कलात्मक तरिकाले गर्न सकिन्छ र त्यो पनि अरु कुनै ठाउँमा भन्दा नेपालमा अझै कलात्मक तरिकाले हुन सक्छ ।’
नेपालको इतिहासमा जनताको छोराले सबैभन्दा बढी अधिकार प्राप्त गर्ने व्यक्ति पनि माथवरसिंह थापा नै थिए ।
उनले राजा राजेन्द्र विक्रम शाहबाट ‘यो कसैलाई नबक्सीयाको श्रीश्रीश्री प्राइम मिनिष्टर यान् कम्याण्डर इनचीफ जनरल माथवर सिंह थापा कलाबहादुर खिताब बक्सी सुनापत्र गरी तक्मा बक्स्यौँ’ भनी उपाधी दिएका थिए ।
भिमसेन थापाको पतनपछि भारत भासिएका माथवरसिंह दरबारको सबै वस्तुस्थिति बुझेपछि १७ अप्रिल १८४३ मा दलबलसहित काठमाडौं प्रवेश गरेका थिए ।
काठमाडौंमा उनको राजा, रानी, युवराज र सर्वसाधारण जनताबाट समेत भव्य स्वागत गरिएको थियो ।
सुरुमा उनले राजाले दिएको मुख्तियार पद सहजै स्वीकार नगरी काका भीमसेन थापा र आफ्नो कुलमा लागेको कलंकको छानविन गर्न माग गरे ।
अन्ततः ३० बैशाख, १९०० मा उनले राजाबाट १० पृष्ठ लामो जितापत्र प्राप्त गर्न सफल भए । माथवरसिंह थापा नेपाल फर्केको करिब आठ महिनापछि २५ डिसेम्बर, १८४३ का दिन औपचारिक रुपमा नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए ।
माथवरसिंह थापाको यो असीम शक्तिबाट डराएर उनको हत्याको योजना बनाइयो । प्रधानमन्त्री रहेकै बखत २ जेठ, १९०२ राति राजनीतिक षडयन्त्रमा उनको गोली हानी हत्या भयो ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, असोज १९, २०७६, ०६:४४:००
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा किन देखिएन नेकपा विभाजनको असर ? लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा किन देखिएन नेकपा विभाजनको असर ?4min read
र, त्यसपछि न्यायाधीशले नाम सोधे र, त्यसपछि न्यायाधीशले नाम सोधे7min read
ओलीलाई रोकौँ, नत्र अरू प्रधानमन्त्री पनि तानाशाह बन्नेछन् ओलीलाई रोकौँ, नत्र अरू प्रधानमन्त्री पनि तानाशाह बन्नेछन् 21 min read
नेपाल- बलिङ, भारत- ब्याटिङ आफैँले पनि राम्रो रन बनाए त टिमलाई राम्रै हुने हो नि । तर, त्यो पनि गर्दैनन् । समर्थक हतास् भएको बेला बलरसँग सल्लाह गरेर एउटा फुलटसमा चौका/छक्का हान्छन् र दर्शकलाई छक्याउँछन् । म्याच फिक्स्ड हुन्छ । जस्तै, यीनै केपी ओली हुन् जसले घुँडो मुन्टो गरी आफ्नो पारी लम्ब्याउनका लागि भर्खरै क्रिकेटको पिच खनेर भागेका छन् 12 min read
वामदेवको गृहजिल्लामा पूर्ववत् छुट्टिए एमाले-माओवादी नेकपा विभाजनमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको गृहजिल्ला बर्दियामा उनकाे एकता अभियान कमजोर, ओली समूहमा वामदेवनिकट केन्द्रीय सदस्य थपिँदा मदन भण्डारी फाउन्डेसन भंग गरेर प्रचण्ड–नेपालतिर7min read
४८ वर्षे सम्बन्ध : माधवको डेरा थियो, ओलीको सेल्टर ओली–माधवको ४८ वर्ष लामो राजनीतिक सम्बन्ध कम रोचक छैन । ‘लभ–हेट’ को उतारचढावपूर्ण सम्बन्धको अन्तर्यमा भने पार्टी र सत्ताको नेतृत्वको आकांक्षा देखिन्छ 10 min read
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा किन देखिएन नेकपा विभाजनको असर ?4min read
गंगामायाको जीवनरक्षाका लागि संवेदनशील बन्न आग्रह2min read
निर्वाचन संवेदनशीलतालाई ध्यान दिन प्रहरी महानिरीक्षक थापाको निर्देशन2min read
श्रीलंकाले खुल्ला गर्‍यो पर्यटक र अन्तर्राष्ट्रिय आगमनका लागि सम्पूर्ण सीमा2min read
दुई तिहाइ चाहियो रे भन्दै हाँसे प्रधानन्यायाधीश2min read
टोखा हत्याकाण्ड : सुदीक्षा जीवित हुँदै पठाओमार्फत कोलोनी छिरेकी थिइन् शर्मिला5min read
न्यायाधीश सपनाको इमानमाथि इजलासमै उठ्यो प्रश्न2min read
इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाको त्यो हतास मुद्रा 13 min read
४८ वर्षे सम्बन्ध : माधवको डेरा थियो, ओलीको सेल्टर 10 min read
ओलीलाई रोकौँ, नत्र अरू प्रधानमन्त्री पनि तानाशाह बन्नेछन् 21 min read
आत्मरतिमा रमाउने शासक : क्लियोपेट्रादेखि विद्यादेवी भण्डारीसम्म6min read
सुरु भयो भर्चुअल शैक्षिक मेला, नौवटा कोर्समा पूर्ण छात्रवृत्ति5min read
काठमाडौंमा निजी विद्यालय खुले, सरकारी अझै अलमलमा3min read